Merchant Account နှင့် Payment Gateway
နိုင်ငံပေါင်း ၁၇၀ ကျော်တွင်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ ၁၅၀ ကျော်ဖြင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအကောင့်အတိုင်ပင်ခံနှင့်နိုင်ငံ ၁၀၆ ခု
ငွေပေးချေမှုရမည့် gateway များ
ငွေပေးချေမှု Soultions ဆက်သွယ်ရန်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်သည်အကောင့်အတွက်အကြံပေးခြင်း၊ ငွေပေးချေသည့်တံခါးပေါက်၊ fintech ကုန်သည်အကောင့်၊ fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ crypto ကုန်သည်အကောင့်၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကုန်သည်အကောင့်များ၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ငွေပေးချေခြင်းတံခါးပေါက်၊ ခရက်ဒစ်ကတ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ကမ်းလွန်ကုန်သွယ်အကောင့်၊ ကမ်းလွန်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ ကမ်းလွန်ဘဏ္intာရေးကုန်သည်အကောင့်၊ ငွေပေးချေသည့်ကုန်သည်အကောင့်၊ ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက်များ၊ စျေးဝယ်လှည်းပေါင်းစည်းခြင်း၊ အီးကောမတ်စ်ပေါင်းစည်းမှု၊ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက်အီလက်ထရွန်းနစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာပေါင်းစည်းမှု၊
အပြည့်အဝ PCI DSS - PCI အချက်အလက်လုံခြုံမှုစံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသည်
အကောင်းဆုံးကုန်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ | အကောင်းဆုံးကုန်သည်အကောင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ | အကောင်းဆုံးငွေပေးချေမှုရသည့်တံခါးပေါက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ | အကောင်းဆုံး fintech ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ | အကောင်းဆုံးဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေခြင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ | အကောင်းဆုံး Forex ကုန်သည်အကောင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ | အကောင်းဆုံးကမ်းလွန်ကုန်သည်အကောင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ | အကောင်းဆုံးအမြင့်မားဆုံးအန္တရာယ်ကုန်သည်အကောင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ
Merchant Account Services ။
ငွေပေးချေမှုရမည့် Gateway မှာန်ဆောင်မှုများ။
Forex ကုန်သည်စာရင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ။
Offshore Merchant Account Services ။
မြင့်မားသောစွန့်စားမှု Merchant အကောင့်န်ဆောင်မှု။
အကွိမျမြားစှာငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ, 150+ နိုင်ငံပေါင်း 170 ကနေငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ။
အကြွေးဝယ်ကဒ်ကို PayPal နှင့်အခြား e-wallets များမှတစ်ဆင့်လက်ခံရရှိသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုများ
Global Payment System အတွက်ပံ့ပိုးထားသော HIGH RISK အမျိုးအစားများရှိစီးပွားရေးစာရင်းများကိုစစ်ဆေးပါ။
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့်သည်သင်၏စီးပွားရေးထူထောင်မှုကိုအသေးစားသို့မဟုတ်ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများသို့ခွင့်ပြုသည့်စီးပွားရေးဘဏ်အကောင့်တစ်ခုနှင့်တူသည် အီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားသူတို့၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များကိုနားလည်ပြီးသို့မဟုတ်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်အကြံဥာဏ်များပေးပြီးကုန်သည်အကောင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသည်။ ကုန်သည်စာရင်း သင်၏စီးပွားရေးကိုခရက်ဒစ်ကဒ်ငွေပေးချေမှုနှင့် / သို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောအီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေမှုအမျိုးအစားများကိုစတင်လက်ခံရန်ကူညီသည်။
Merchant account ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ထပ်ဆောင်းအပြောင်းအလဲအတွက်အခကြေးငွေဖြင့်လာသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိအတိုင်ပင်ခံများအကူအညီဖြင့်ပညာရှိစွာရွေးချယ်ရန်အရေးကြီးသည်။
သင့်စီးပွားရေးအတွက်မှန်ကန်သောကုန်သည်အကောင့်ကုမ္ပဏီကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်မမျှော်လင့်သောအခက်အခဲများကိုရှောင်ရှားရန်အထူးအရေးကြီးသည်။ သင်၏ကုန်သည်အကောင့်သည်သင်၏စီးပွားရေးအရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။
● Fintech ကုန်သည်အကောင့်
● Crypto ကုန်သည်အကောင့်များ
ကျွန်တော်တို့ကိုတတ်နိုင်နှင့်အတူသင်ကူညီကြပါစို့ ကုန်သည်အကောင့်များ, တတ်နိုင် ကုန်သည်အကောင့်ပံ့ပိုးပေး ထိပ်တန်းကထောက်ပံ့ပေးအတိုင်ပင်ခံ ကုန်သည်အကောင့်အတိုင်ပင်ခံ
သင်၏စီးပွားရေးအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက် ဒက်ဘစ်နှင့်အကြွေးဝယ်ကဒ်ကိုလက်ခံပါ သင်၏အွန်လိုင်းစတိုးအတွက်။ သင်၏စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ထိရောက်။ စျေးသက်သာသောအခြားနည်းလမ်းနှင့်သင်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုနိုင်ပြီး၎င်းသည်ရိုးရာငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်ထက်သင့်စီးပွားရေးတည်ဆောက်ပုံနှင့်ပိုသင့်တော်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား“ ကုန်ကျစရိတ်၊ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရန်နှင့်အနာဂတ်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်” ကိုကယ်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေပေးချေမှုရမည့်တံခါးပေါက်ဆိုင်ရာအကြံပေးမှုသည်ကုမ္ပဏီငယ်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်များနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
● Fintech Gateway မှာ
● Crypto ငွေပေးချေမှုရမည့် Gateway
ကျွန်တော်တို့ကိုတတ်နိုင်နှင့်အတူသင်ကူညီကြပါစို့ ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်, တတ်နိုင် ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်ပံ့ပိုးပေး ထိပ်တန်းကထောက်ပံ့သည် ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်အတိုင်ပင်ခံ
ငွေပေးချေမှုရမည့် Gateway အတွက်လျှောက်ထားပါ
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် FINTECH ၏စွမ်းအားသည်အင်တာနက်ဘဏ်လုပ်ငန်းမှငွေပေးချေခြင်း၊ အီး - ပိုက်ဆံအိတ်များ၊ ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းများ၊ အခြားနိုင်ငံများမှငွေပေးချေခြင်း၊ ပြည်ပတွင်ငွေပေးချေခြင်းစသည့်ရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးမှခရက်ဒစ်ကဒ်၊ crypto ငွေကြေးနှင့်မိုဘိုင်းအော်ပရေတာမှတစ်ဆင့်ငွေပေးချေမှု။
Fintech ကုန်သည်အကောင့်သည် -
● Crypto ငွေကြေးငွေပေးချေမှု.
စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှု။ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေပါ၊ သင့်စီးပွားရေးကိုအကောင်းဆုံး crypto ကုန်သည်အကောင့်ရရှိရန်ကူညီပေးပါရစေ
စျေးနှုန်းချိုသာ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာသင်၏စီးပွားရေးအတွက်သင်၏ Bitcoin ကုန်သည်အကောင့်အတွက်ပံ့ပိုးသူကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။
မြင့်မားသော Volume ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့။ ပမာဏများသော Bitcoin ကုန်သည်အကောင့်များကသင့်လုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့ရန်လိုအပ်သည့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။
Chargeback ကာကွယ်တားဆီးရေး။ သင်၏ရောင်းချမှုနှင့်ဆုံးရှုံးမှုကိုသေချာစေရန် chargebacks တောင်းဆိုမှုများကိုရပ်တန့်ပါ။ သင်အလွယ်တကူအနိုင်ရနိုင်ကြောင်း chargebacks, စစ်တိုက်ခြင်း။
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံး Crypto ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ။
ကျွန်တော်တို့ကိုတတ်နိုင်နှင့်အတူသင်ကူညီကြပါစို့ crypto အကောင့်များ, တတ်နိုင် crypto ကုန်သည်အကောင့်များ, တတ်နိုင် crypto ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်, တတ်နိုင် crypto ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်ပံ့ပိုးပေး တတ်နိုင်ကထောက်ပံ့ပေး crypto ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်အတိုင်ပင်ခံ
Crypto Merchant အကောင့်အတွက်လျှောက်ထားပါ
သင်၏အွန်လိုင်းစီးပွားရေးအတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်ကို သုံး၍ ခရက်ဒစ်ကဒ်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်ပေါင်းစည်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်သင့်အတွက်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းနိုင်သည်။ သို့သော်သင်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအွန်လိုင်းငွေပေးချေခြင်းသို့မဟုတ်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်လက်ခံလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သည်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အမည်ခံကုန်ကျစရိတ်။ လုံခြုံသောငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက် (သို့) ကုန်သည်အကောင့်ကိုသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သို့မဟုတ်အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးစတိုးသို့ပေါင်းစပ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့၏ ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီငွေပေးချေမှုရသည့်တံခါးပေါက်နှင့်ကုန်သည်အကောင့်တို့အတွက်ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။ သို့မှသာသင်သည်အွန်လိုင်းနှင့်နိုင်ငံတကာဖောက်သည်များထံမှငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံနိုင်သည်။ Integration လုပ်ငန်းစဉ်သည်မလွယ်ကူလှပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းမှုကိုပံ့ပိုးပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည် တတ်နိုင်စျေးနှုန်းများ.
မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်မဆိုအရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာလှည်းကိုစွန့်ပစ်ခြင်းနည်းခြင်းနှင့်ဖြစ်သည် အောင်မြင်သောဝယ်ယူမှုငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီ အကြွေးဝယ်ကတ်ကိုလက်ခံပါ, e-ပိုက်ဆံအိတ်ဒါမှမဟုတ် cryptocurrenciesစျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းဖြင့်သင့်ဖောက်သည်များ၏စျေးဝယ်မှုအတွေ့အကြုံကိုပျော်စရာကောင်းစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့သည်လူကြိုက်များသောကုန်သည်အကောင့်များနှင့်ငွေပေးချေသည့်တံခါးများအားလုံးတွင်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။
သင်၏စီးပွားရေးအတွက်ပြီးပြည့်စုံမှုဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ ချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းမှု ...
Affordable ဖြင့်ကူညီပေးပါ ငွေပေးချေမှုရမည့် Gateway မှာပေါင်းစည်းမှုစျေးနှုန်းချိုသာ Merchant Account Integrazzjoniစျေးနှုန်းချိုသာ အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှုစျေးနှုန်းချိုသာ စျေးဝယ်လှည်းပေါင်းစည်းမှုစျေးနှုန်းချိုသာ ဝဘ်ဆိုက်များအတွက်အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှုစျေးနှုန်းချိုသာ ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်ပေါင်းစည်းမှုကုမ္ပဏီ နှင့်စျေးသက်သာ ကုန်သည်အကောင့်ပေါင်းစည်းမှုကုမ္ပဏီ.
ကျွန်ုပ်တို့မှတဆင့်ထည့်သွင်းထားသောကုမ္ပဏီများအတွက်အခမဲ့ - ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ။
အခကြေးငွေများတွင်ငွေပေးချေမှုအတွက်အတိုင်ပင်ခြင်းနှင့်ငွေပေးချေခြင်းတံခါးပေါက် (သို့) ကုန်သည်အကောင့် (သို့) crypto ကုန်သည်အကောင့်၊ fintech ကုန်သည်အကောင့်၊ အကြွေးဝယ်ကဒ်ထုတ်ယူခြင်း (သို့) သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးသောစွန့်စားမှုရှိသောကုန်သည်အကောင့်အတွက်အကြံဥာဏ်များပါ ၀ င်သည်။
Merchant Accout ဝန်ဆောင်မှု:
နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၉ ခုမှငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံပါ
ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများရောင်းချခြင်းမှသော်လည်းကောင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှရရှိသော ၀ င်ငွေကိုဘဏ်ငွေလွှဲ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ VISA / MC ကတ်များ (သို့) PayPal မှတဆင့်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
Merchant Account အခကြေးငွေ
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လျှို့ဝှက်စာချုပ်အရသင့်မေးမြန်းမှုကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမ ဦး ဆုံးငွေပေးချေမှုကိုမယူဆောင်ပါ။ သင်၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်များကိုလည်းပေးချင်ပါသည်။
ငါတို့သည်သင်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်ပထမ ဦး ဆုံးသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဆွေးနွေးပြီးနောက်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံ။
သင်၏စီးပွားရေးပန်းတိုင်များကို ဦး စွာနားလည်ပြီး၎င်းကို အခြေခံ၍ စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းနည်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
Orders Dashboard ကိုသွားပါ
"ကျွန်တော်တို့ဟာ startup တစ်ခုပါ။ စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ မလုပ်ရသေးတဲ့အမှားတွေနဲ့အနာဂတ်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်ရေးဆွဲမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်။ "
ကျွန်ုပ်တို့သည်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်စတင်ဖွင့်လှစ်သူများအတွက်အထူးဂရုပြုပါသည်၊ ရေရှည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည့်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်ကိုပေးသောကြောင့်၎င်းတို့သည်လျင်မြန်စွာစတင်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့မှသာငွေပေးချေမှုကိုလျင်မြန်စွာလက်ခံခြင်းဖြင့်ယနေ့အချိန်တွင်အတည်ပြုနိုင်သည်။ ဘဏ်များ၊ ဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အကြွေးဝယ်ကဒ်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်အခြားနည်းလမ်းများအတွက်ကြားခံများမှအတည်ပြုရန်ခက်ခဲသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ချိန်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်သို့မဟုတ်အသေးစားစီးပွားရေးတည်ထောင်ခြင်းဖြစ်သည့်ကမ္ဘာတစ်လွှားမှဖောက်သည်ပေါင်း ၁၀၀၀၀ ကျော်အားသင်၏ရည်မှန်းချက်အတွက်အကြံပြုရာ၌အတွေ့အကြုံရှိသည်။ သင်၏လုပ်ငန်းသည်ကုန်စည်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ငွေပေးချေမှုကိုစတင်ရန်အပိုကုန်ကျစရိတ်များလိုအပ်ပါကစီးပွားရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးနိုင်သောငွေပေးချေမှုကိုလျင်မြန်စွာစတင်ရန်နှင့်ကုန်သည်အကောင့်သို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုရသည့်တံခါးဝကိုသင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပေါင်းစည်းရန်ကူညီရန်ဖြစ်သည်။
●အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကုမ္ပဏီငယ်များအတွက်အကြွေး ၀ ယ်ကဒ်ထုတ်လုပ်ခြင်း
# Fintech ကုန်သည်သည်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကုမ္ပဏီငယ်များအတွက်စာရင်း
●အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကုမ္ပဏီငယ်များအတွက် Fintech Payment Gateway
သိရန်လိုအပ်သည် - Merchant Account
သင်၏စီးပွားရေးသည်ခရက်ဒစ်ကတ်များ၊ အီလက်ထရောနစ်ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် cryptocurrencies ကိုသင်ကုန်သွယ်အကောင့် / ငွေပေးချေမှုရမည့်တံခါးပေါက်ရရှိရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါသည်။
စာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ်အံ့အားသင့်စရာအခကြေးငွေများနှင့် PCI လိုက်နာမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမရှိတော့ပါ။
ငွေပေးချေမှုအားလုံးကိုငွေပေးချေခြင်းအမျိုးအစားများ၊ အန္တရာယ်အဆင့်များ၊ နိုင်ငံများနှင့်ငွေကြေးများအပါအ ၀ င်တစ်နေရာတည်းတွင်ပြသထားသည်။
virtual terminal ကိုပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူရောင်း volumes ကို။
သင်၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ ခရက်ဒစ်ကဒ်ပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားငွေပေးချေခြင်းနည်းလမ်းများအတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုအတွက် ၀ န်ဆောင်ခပေးဆောင်ပါမည်။
One Time Set-Up အခကြေးငွေ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်တိုင်ပင်ခြင်းကိုမပံ့ပိုးပါ ကုန်သွယ်ငွေစာရင်းသို့မဟုတ်ငွေပေးချေခြင်း Gateway မှာ အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ:
· ငွေပေးချေမှု Solutions ကုန်သည်များသို့မဟုတ်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများကိုပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
· ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုများ VoIP ၏နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းသူလျှိုများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမှုမရှိပါ။
· ငွေပေးချေမှုရမည့် Gateway မှာပေါင်းစည်းမှု မည်သည့်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးကြသည်မဟုတ်။
· ကုန်သည်အကောင့်ပေါင်းစည်းမှု မျိုးရိုးဗီဇပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
· ကမ်းလွန်ကုန်သည်အကောင့် အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းမရှိပါ။
· ကမ်းလွန် fintech ကုန်သည်အကောင့် လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများရောင်းဝယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်သောကုမ္ပဏီများအတွက်မရနိုင်ပါ။
· စျေးဝယ်လှည်းပေါင်းစည်းမှု တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
· ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက်အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှု ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
· မြင့်မားသောအန္တရာယ်ကုန်သည်အကောင့် အပြာစာပေနှင့်ဆိုင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုခွင့်မပြုပါ။
·ကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းငွေပေးချေမှုအကောင့် supporting MLM ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။
· ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုများ မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကိုရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မရရှိပါ။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : Million Makers သည်ငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက် KYC ၏စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျသေချာစေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်းတစ်ချိန်တည်းတွင်ငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများသို့မဟုတ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများမှပေါ်ပေါက်လာနိုင်သောမည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်မဆိုကျွန်ုပ်တို့တာဝန်မယူပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံပေးချက်ကိုပဲလုပ်တယ်။ ဖောက်သည်များ၏တာ ၀ န်သည်လုံလောက်စွာလုံ့လဝီရိယရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အခြားစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ
(နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံကိုလွှမ်းခြုံထားသည်)
အပြင်ရွေးချယ်ခြင်းများအတွက်အတိုင်ပင်ခံထံမှ မှန်ကန်သောငွေပေးချေမှုအပြောင်းအလဲနဲ့မိတ်ဖက်ကျနော်တို့လည်းအတူတူထောက်ခံပါတယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်ပေါင်းစည်းမှု ငါတို့မှာပေးတဲ့ဆော့ဝဲလ်ကုမ္ပဏီရှိတယ် တတ်နိုင်သော web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် CRM၊ စီးပွားရေးအကြံဥာဏ်များ၊ virtual နံပါတ်များ၊ လူအင်အားအတိုင်ပင်ခံနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းပေးသည်။ ထို့ကြောင့် စုစုပေါင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက် in 106 နိုင်ငံများ.
ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတကာနှင့်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံနှစ်များစွာရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုမည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး သို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ထက် ကျော်လွန်၍ ဆက်သွယ်မှုရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှရရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကြောင့်ထောက်ပံ့သည်။
ငါတို့စျေးအသက်သာဆုံး ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် အကောင်းဆုံးစာရင်းကိုင်များကထောက်ပံ့ပေး
ကျနော်တို့ဖောက်သည်များကို ကမ်းလွန်ကော်ပိုရိတ်အကောင့်ကိုဖွင့်ပါ နှင့်နိုင်ငံတကာဖောက်သည်များဘဏ်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရန်
HR အတိုင်ပင်ခံနှင့်ငှားရမ်းမှုထောက်ခံမှု။ ငါတို့ ဝန်ထမ်းကုမ္ပဏီ သင်၏နေရာလွတ်များကိုဖြည့်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ ငါတို့သုံးပါ အခမဲ့အလုပ်ပေါ်တယ် နေရာလွတ် post ရန်။
CRM ဆော့ဝဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အခမဲ့ CRM နှင့်အတူကူညီခြင်း။ ကျနော်တို့ထုံးစံဖြည့်ဆည်း CRM ပေါင်းစည်းမှု, စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီး။
အခမဲ့ CRM ဆော့ဝဲ
ဘယ်ကနေချဲ့ထွင်ရန်နှင့်တတ်နိုင်လိုအပ်ပါတယ် virtual စီးပွားရေးလိပ်စာ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်သို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာ ၆၅ ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
VoIP ၀ န်ဆောင်မှုများ
အပါအဝင် VoIP ဝန်ဆောင်မှုများ Virtual နံပါတ် နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ နှင့်မြို့ကြီး ၂၉၀ ။ မျိုးဆက်သစ် VoIP ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးလိုအပ်ပါတယ် အဆင်သင့်စီးပွားရေး ၎င်းသည်သင့်ကိုစတင်ကန်ရန်အတွက်ကူညီရန်ဖြစ်ပြီး၊ လုံ့လဝီရိယရှိရှိဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်
သင်လိုအပ်သောအထောက်အပံ့အားလုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်, ငါတို့ရှိသမျှသည်ခေတ်သစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း tools များပေး။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Software ကုမ္ပဏီသည် ၀ က်ဘ်တည်ဆောက်မှု၊ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းတီထွင်ခြင်း၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်မည်သည့်စိတ်ကြိုက်ဆော့ဖ်ဝဲလ်အမျိုးအစားများတွင်မဆိုနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ကြိုးစားနေကြသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများကိုထောက်ပံ့ပေးသည် ဝဘ်ဆိုက်တီထွင်ခြင်း၊ ဆော့ဝဲလ်တီထွင်ခြင်း၊ အီလက်ထရောနစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းဖွံ့ဖြိုးခြင်း.
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ Merchant Account နှင့် Payment Gateway အတွက်ဖြစ်သည်
အခမဲ့တိုင်ပင်တောင်းဆိုခြင်း Merchant Account နှင့် Payment Gateway အတွက်ဖြစ်သည်
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/merchant-account/ တွင်ပုံစံဖြည့်သည်။
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/merchant-account/ မှသင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့လာသည်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/merchant-account/